Raha Andriamanitra aho - Fiangonan 'Andriamanitra Suisse Manerantany
haino aman-jery > Journal succession > 2015-01 mpandimby ny Magazine > Raha izaho no Andriamanitra
Raha ny marina, dia sarotra amiko ny mahazo an'Andriamanitra indraindray. Tsy izy mihitsy no mandray ny fanapahan-kevitra horaisiko raha izaho no eo amin’ny toerany. Ohatra, raha izaho no Andriamanitra dia tsy namela ny orana tamin’ny sahan’ny tantsaha ratsy fanahy sy feno fankahalana aho. Ny mpamboly tsara sy manao ny marina ihany no mahazo ranonorana amiko, fa ny Baiboly kosa milaza fa Andriamanitra mampilatsaka ny ranonorana amin’ny marina sy ny tsy marina (Matio. 5,45).
Raha izaho no Andriamanitra, dia ny ratsy fanahy ihany no ho faty aloha, ary ny tsara fanahy no ho ela velona sy sambatra. Milaza anefa ny Baiboly fa avelan’Andriamanitra ho ringana ny olo-marina indraindray, satria tokony ho afa-mandositra ny ratsy izy ( Isaia 57:1 ). Raha izaho no Andriamanitra, dia hampahafantatra ny rehetra foana izay ho andrasana amin’ny hoavy aho. Tsy hisy hametra-panontaniana momba ny zavatra noeritreretiko. Ho voalamina tsara sy ho mora azo izany rehetra izany. Fa ny Baiboly dia milaza fa Andriamanitra ihany no mamela antsika hijery amin'ny alalan'ny fitaratra rahona (1. Korintiana 13:12). Raha izaho no Andriamanitra dia tsy hisy fijaliana eto amin'izao tontolo izao. Fa Andriamanitra milaza fa tsy azy izao tontolo izao fa an'ny devoly, ka noho izany dia tsy miditra mandrakariva izy ka mamela ny zavatra tsy takatry ny saintsika (2. Korintiana 4:4).
Raha izaho no Andriamanitra dia tsy henjehina ny Kristianina, fa ny manaraka an'Andriamanitra sy manao izay asainy ataony ihany no tadiaviny. Fa ny Baiboly dia milaza fa izay manaraka an'Andriamanitra dia henjehina (2. Timoty 3:12).
Raha Andriamanitra aho dia ho sarotra ho an'ny rehetra ihany koa ny fanambin'ny fiainana. Milaza anefa ny Baiboly fa samy miady amin’ny zavatra samy hafa isika tsirairay, ary ny ady ataontsika dia tsy maintsy miady fa tsy olon-kafa. ( Hebreo 12:1 ).
Tsy izaho Andriamanitra - tsara vintana ho an'izao tontolo izao. Manana tombony manokana amiko Andriamanitra: Mahagaga sy tsy misy aho. Ny mitsara ny fanapahan-kevitra raisiko ho an'ny fiainako na ny ain'ny olon-kafa dia hadalana fotsiny satria Andriamanitra irery no mahalala ny fotoana tokony hilatsahan'ny orana sy rehefa tsy tokony hanao izany isika. Izy irery ihany no mahalala ny fotoana tokony hiainantsika na ho faty. Izy irery ihany no mahalala rehefa tsara raha fantatsika ny zava-nitranga sy ny tranga ary rehefa tsy izany. Izy irery ihany no mahalala ny olana sy ny fanamby mamokatra ny vokatra tsara indrindra amin'ny fiainantsika ary tsy izany. Izy irery ihany no mahalala ny fomba hiasany antsika ka omem-boninahitra izy.
Ka tsy momba antsika izany fa momba azy fotsiny ary noho izany tokony hitodika any amin'i Jesosy ny masontsika (Hebreo 12: 2). Tsy mora foana ny mankatò, nefa mbola safidy tsara kokoa noho ny finoana fa hanao tsara kokoa noho Andriamanitra aho.
Raha izaho no andriamanitra?